मानिसले चिताएको सबै पूरा गरिदिने दक्षिणकाली भगवती मन्दिर लाइ छोएर दर्शन गरि शेयर गरौ ! - Bihani Nepal
मानिसले चिताएको सबै पूरा गरिदिने दक्षिणकाली भगवती मन्दिर लाइ छोएर दर्शन गरि शेयर गरौ !
1 year ago AMISH PATHAK
दक्षिण काली मन्दिर, दक्षिण काली मन्दिर, काठमाडौं बाहिर २२ किलोमिटर (१ 14 माइल) र फर्पि of गाउँ बाहिर १ किलोमिटर (०. mi मील) अवस्थित, काली देवीलाई समर्पित नेपालका प्रमुख हिन्दू मन्दिर मध्ये एक हो। पशु बलिहरू, विशेष गरी cockerels को र अप्रकाशित नर बाख्रा, देवीको पूजा गर्ने मुख्य तरिका हो, र यो विशेष गरी दशैंको चाडमा देखा पर्दछ।  दक्षिण काली मन्दिरको पनि नेपालमा पशुपतिनाथ मन्दिर र मनकामना मन्दिर जत्तिकै धार्मिक मूल्य छ। यस मन्दिरमा पर्यटकहरूको आकर्षण बढेको छ किनकि यो लोकप्रिय पर्वतारोहण गन्तव्य हो जुन नेपालको फार्पि गाउँ नजिकै अवस्थित छ।
अत्यन्त शक्तिशाली देवी कालीलाई समर्पित, दक्षिंकली मन्दिर हिंदुहरूको लागि धेरै लोकप्रिय तीर्थयात्रा हो। भक्तहरू विश्वास गर्छन् कि देवीले शुद्ध हृदयले सोध्नेहरूलाई ईच्छा दिन्छ। शनिबार र म to्गलबार देवीलाई प्रसन्न पार्न धार्मिक बलिहरू गरिन्छ (मूर्तिपूजा र अप्रकाशित बाख्राको) र त्यसपछि मूर्तिको रक्तपात हुन्छ। विशेष गरी दशैंको चाडले मन्दिरमा ठूलो भीडलाई आकर्षित गर्दछ।
तीर्थयात्रा चरणहरु को एक उडान को तल अवस्थित छ र gilded साँप को एक चन्दवा छ। भनिन्छ कि मन्दिर १ herself औं शताब्दीमा शासन गर्ने मल्ल राजाको सपनामा आएर देवीको आदेशमा बनाइएको थियो र मन्दिर कहाँ र कसरी बनाउने भनेर बताउनुभयो। मन्दिरमा जाने रूटहरू देवता, पूजाको लागि फूल, भैंसीको दूध, दही र खुवा (गाढा मिठोबाट बनेको मिठो) बेच्ने स्टालले लाइनमा छन्। दक्षिंकली मन्दिरको वरिपरिको वातावरण एकदमै रमणीय छ। अक्सर जोडीहरु द्वारा एक रोमान्टिक स्थान को रूप मा भेटिन्छ। यस क्षेत्र भित्र पिकनिक र ट्रेकिंग अभियानहरु पनि सामान्य छन्।
हिसाबले पहाडहरू बीचको पातलो बाटो तान्नको लागि खींचिएको छ र सीमित र गहन प्वालमा तल हेर्ने हो भने तल झर्नु र पुरानो निलम्बन जडानमा उपयोगी छ। दृश्य केवल सबै हरियो तरकारीहरुका साथ केवल अद्भुत छ, र जलवायु त्यहाँ वरिपरि एकदम अद्भुत छ।
व्यक्तिले यस स्थानमा भ्रमण भ्रमण गर्न सक्छन्। किनकि यो ठाउँ उपत्यकादेखि धेरै टाढा छ, त्यहाँ कम हलचल, झुंड र विभिन्न प्रकारका प्रदूषणहरू छन्। व्यक्तिहरू पनि यस स्थानमा प्रियजनहरूसँग शुल्क लिईरहेछन्। यो स्थान ठूलो मनोरञ्जनको साथ धन्यको स्थान जस्तै आधारभूत हो।
पौराणिक कथा भन्छ कि एक पटक मल्ल राजाले देवी कालीको सपना देखी, र उनले राजालाई एउटा एकदम अनौठो र अज्ञात ठाउँमा मन्दिर निर्माण गर्न निर्देशन दिए। राजाले यसलाई कमान्डको रूपमा लिए र आफ्ना मान्छेहरूलाई तुरुन्तै निर्माण सुरु गर्न निर्देशन दिए जबकि एक व्यक्तिले भने कि उनले काली देवीको पत्थरको तस्वीर राखेका थिए।
यस्तै ठाउँमा जहाँ देवी कालीले राजालाई मन्दिर बनाउन भने। तस्विर कम्पोनेन्टहरूसँग खुला छोडियो किनभने उनले उनको टाउकोमा बताइन् कि एक सुन्दर छायाँ चारवटा साँपको साथ ठाडो राखिएको थियो। थप रूपमा, एकजनाले शासक गणेशको चित्र, सात अस्थमाट्रिकस र ढु Bha्गा भैरवलाई देवीको चित्रले देख्न सक्छन्।
Previous हेला नगर्नुहोला ! नाग देउताको फोटोलाई छोएर ॐ लेखि शेयर गरौ ! नपढ्ने लाइ ठुलो दशा लाग्ने !
Next धन लाभ हुनुअघि मिल्छन् यस्ता संकेत ॐ लेखी शेयर गरी हेर्नुहोस